नेपालले आगामी वैशाखमा आफ्नै भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्दै – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१ श्रावण २०७७, बिहीबार ००:४७ English
नेपालले आगामी वैशाखमा आफ्नै भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्दै
सुभानु आचार्य, ललीतपुर, १७ पुस । नेपालले आगामी वैशाखमा आफ्नै भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्ने भएको छ । जापानको क्युटेक विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिको शोध गरिरहेका दुई नेपाली इञ्जिनीयरको सहयोगमा पहिलो पटक आफ्नै भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्न लागिएको हो ।
१८ पुष २०७५, बुधबार ००:५१ मा प्रकाशित
कहिले चल्छन् लामो दूरीका सवारी साधन ?	३१ असार २०७७, बुधबार १८:१३